Va Mothlante Vanoti Vekunze Vanofanira Kuwongorora Sarudzo mu Zimbabwe
Va Mothlante vari mu America vachikuridzira hukama pakati pe America ne South Africa. VaMothlante vanoti sarudzo dzichaitwa mu Zimbabwe dzakakosha zvikuru zvekuti dzinoda vanhu vazhinji vekunze kuti dziitwe zvakanaka
Mutevedzeri wemutungamiri we South Africa, Va Kgalema Motlanthe, vanoti nyika yavo iri kutarisira kuti musarudzo dzichaitwa mu Zimbabwe, pange paine vanhu vazhinji vakazvimirira vanobva kunyika dziri kunze kuitira kuti vaongorore sarudzo iyi sezvakaitika muna 1980 apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere.
Va Mothlante vakataura mashoko aya masvondo apfuura uye vakakurukura pamusoro pe Zimbabwe nemusi weChipiri nemutevedzeri vemutungamiri we America, Va Joe Biden, pamuzinda we White House nezuro.
Va Mothlante vari mu America vachikuridzira hukama pakati pe America ne South Africa. VaMothlante vanoti sarudzo dzichaitwa mu Zimbabwe dzakakosha zvikuru zvekuti dzinoda vanhu vazhinji vekunze kuti dziitwe zvakanaka.
Vatungamiriri vaviri ava vakakurukurazve pamusoro pezviri kuitika mu Lybia, Ivory Coast ne Sudan.
Va Biden vakati America inotarisira kune South Africa kuti itore chinzvimbo chayo semutungamiri mukubatsira kugadzirisa matambudziko mu Africa.
Nyanzvi mune zvematongerwe enyika, Va Charles Mangongera, vati chingava chinhu chakanaka kuti sarudzo dzichaitwa dziongororwe nevekunze, asi havaoni zvichiitika